स्वास्थ्य पेज » महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ कि बढी ? महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ कि बढी ? – स्वास्थ्य पेज
महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ कि बढी ?
नेपालगन्जः २०७८ महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जुन हरेक महिलाको २१ देखि ३५ दिनको बीचमा हुन्छ । महिलाहरूको हार्मोनअनुसार यो प्रक्रिया ४ देखि ६ दिनसम्म रहन्छ । यद्यपि महिनावारी समय र परिस्थितिअनुसार फेरबदल भइरहन्छ । जस्तो कि, शरीर कमजोर हुनु, तनावमा रहनु, एनेमियाजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनु । यिनै कारणले गर्दा कुनै महिना सामान्य रहन्छ भने कुनै महिना राम्रोसँग रगत जाँदैन ।
-महिनावारीको समयमा कम रगत जानु नै यसको मुख्य लक्षण हो ।
-कम रगत जानु भनेको दुई दिनभन्दा कम ब्लिडिङ हुनु ।
-हल्का र कम कम रगत जानु ।
-पहिलो र दोस्रो दिन सामान्य रगत जानु र त्यसपछि पूरै बन्द हुनु ।
-महिनावारी ढिलो हुनु ।
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार प्रकाशित